China slurry mgbapụta Expeller Ring factory na suppliers | YAAO
A na-eji mgbapụta slurry mgbapụta maka mgbapụta AH / HH / L / M slurry nfuli, mgbanaka mgbaaka na-arụkọ ọrụ yana onye na-azụ ahịa maka nfuli slurry ahụ. Ha enweghi ike inye aka mechie mgbapụta ahụ, kamakwa belata ike centrifugal. Nhazi na ihe nke onye na-ere ahịa dị mkpa na ndụ ya
Akara a kwesịrị ekwesị n'ihi na ọtụtụ slurry pumping ngwa. Ọ na-enye nnukwu uru na enweghị mmiri gland chọrọ. Onye na-ere ihe na-agba ọsọ na mgbanaka nke otu ihe ahụ ma soro vanes na-arụ ọrụ na azụ ihu nke agụba ahụ na-egosi akara mkpuchi. A griiz lubricated juru n'ọnụ gland na olu na na-ejegharị yiri mgbaaka leakage leakage mgbe mgbapụta bụ anyịnya. Isi mmiri na-emetụta ịdị irè nke akara onye na-ere ọkụ na n'okpuru ọnọdụ ọrụ ọ bụla ụdị akara a na-egosipụta kpamkpam.
Anyị nwere ike inye Mgbasa mgbanaka nke ihe dị iche iche roba maka ngwa gị na gburugburu ebe obibi dị mgbagwoju anya
Slurry mgbapụta Expeller Ring Code
AH slurry nfuli
Chrome dị elu, Rubber
HH slurry nfuli
M slurry nfuli
Ajịrịja nkume mgbapụta Expeller Ring
G (H) mgbapụta gravel
* YAAO® slurry mgbapụta expeller mgbanaka bụ naanị na-agbanwe agbanwe na Warman® slurry mgbapụta expeller mgbanaka.
Nke gara aga: Slurry mgbapụta roba liner
Osote: AH slurry mgbapụta roba impeller
SPR slurry mgbapụta Rubber Back liner